မော်နီကာ Rambeau မော်ကွန်းတိုက် - Brick Fanatics
26 / 09 / 2021 26 / 09 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 56 Views စာ 1 မှတ်ချက် 71031, 71031 Marvel စတူဒီယို, 76125 သံက Man သံမဏိခန်းမ, ၇၆၁၉၀ Iron Man: Iron Monger Mayhem, 76196 Marvel ထွန်းပြက္ခဒိန်, တည်ဆောက်, အီစတာကြက်ဥ, ပန်ကာ, သံမဏိလူသား, Lego, LEGO စုဆောင်း Minifigures 71031 Marvel စတူဒီယို, Lego မှ marvel, Loki, Marvel, အသေးစား, သေးသေးလေး, စကခ, ပုံစံ, မော်နီကာရက်ဘို, ကိုးကား, တိုနီ Stark, WandaVision
01 / 09 / 2021 01 / 09 / 2021 ခရစ် Wharfe 200 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, Captain America, ဗိုလ်ကြီးဂarter, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Thanos ၏ Blade ကိုအတူ Gamora, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego မှ marvel, Lego Minifigures, Loki, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, MCU, သေးသေးလေး, မော်နီကာရက်ဘို, Sylvie, အဆိုပါစွန်ငှက်နှင့်ဆောင်းရာသီ Soldier, Scarlet စုန်းမ, အဆိုပါမျှော်မှန်းချက်, အဆိုပါဆောင်းရာသီ Soldier, WandaVision, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?, ဖုတ်ကောင်ဗိုလ်ကြီးအမေရိကတိုက်, ဖုတ်ကောင် Hunter Spidey
24 / 08 / 2021 24 / 08 / 2021 ရော့ Paton 320 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, Captain America, ဗိုလ်ကြီးဂarter, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Disney, Disney+, Thanos ၏ Blade ကိုအတူ Gamora, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, LEGO စုဆောင်း Minifigures 71031 Marvel စတူဒီယို, Lego မှ marvel, Lego Minifigures, Loki, Marvel, သေးသေးလေး, မော်နီကာရက်ဘို, Sylvie, အဆိုပါစွန်ငှက်နှင့်ဆောင်းရာသီ Soldier, Scarlet စုန်းမ, အဆိုပါမျှော်မှန်းချက်, T'Challa စတား - Lord, WandaVision, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?, ဆောင်းရာသီ Soldier, ဖုတ်ကောင်ဗိုလ်ကြီးအမေရိကတိုက်, ဖုတ်ကောင် Hunter Spidey
တစ် ဦး LEGO နိုင်ဘူး Marvel ထင်ထားတာထက် minifigure ပွဲ ဦး ထွက်လား။
21 / 08 / 2021 21 / 08 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 158 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, Black က Panther, ထာဝရက Black Panther Wakanda, ကပ္ပတိန် Marvel, သံမဏိလူသား, သံမဏိart, ကီဗင် Feige, Lego, Lego မှ marvel, Marvel, အသေးစား, မော်နီကာရက်ဘို, အဆိုပါ Marvels, တိုနီ Stark
Kevin Feige ကမကြာခင်လာတော့မယ့်အကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ် Marvel စူပါဟီးရိုးသည်မျှော်မှန်းထားသည်ထက်စောစွာပွဲ ဦး ထွက်မည်ဖြစ်ပြီးအသေးအဖွဲတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်ဟုအရိပ်အမြွက်ပြောကြားခဲ့သည်
21 / 08 / 2021 21 / 08 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 209 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, Agatha Harkness, ကပ္ပတိန် Marvel, ကပ္ပတိန် Marvel 2, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego, Lego မှ marvel, Lego Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Marvel, အသေးစား, မော်နီကာ, မော်နီကာရက်ဘို, ဦး ခေါင်းခွံ, superhero, အဆိုပါ Marvels, Scarlet စုန်းမ, WandaVision
18 / 08 / 2021 01 / 09 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 465 Views စာ0မှတ်ချက် 60302 တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ကယ်ဆယ်ရေးစစ်ဆင်ရေး, 71026 DC စူပါသူရဲကောင်းများစုဆောင်းထားသောအသေးစား, 71031 Marvel စတူဒီယို, 76021 Milano အာကာသယာဉ်အားကယ်ဆယ်ရေး, 76107 Thanos Ultimate စစ်တိုက်, 76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & အဆိုပါ Hydra Stomper, 76237 Sanctuary II ကို, မိကျောင်း Loki, Black က Panther, Bucky ကျီများ, Captain America, ဗိုလ်ကြီးဂarter, City, Clone Trooper ဖြစ်သည်, ကော်ဖီခွက်, စုဆောင်း Minifigures, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Disney+, အီစတာကွကျဥ, ဖါး, Thanos ၏ Blade ကိုအတူ Gamora, ရဟတ်ယာဉ်, Lady Loki, Lego, Lego CIty, LEGO CMFs များ, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego မှ marvel, Lego Marvel စတူဒီယို, Lego Marvel စူပါသူရဲကောင်းများ, Lego Minecraft, Lego Minifigures, lego ပြန်လည်သုံးသပ်, Lego သုံးသပ်ချက်များ, Lego Spider-Man, Lego Star Wars, Loki, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, Minecraft, အသေးစား, သေးသေးလေး, မော်နီကာရက်ဘို, ဆန်းစစ်ခြင်း, reviews, ဆမ် Wilson, Spider-Man, Star Wars, စတား-သခင်ဘုရား, streaming များ, superhero, Superheros တွေက, ဓားကို, Sylvie, အဆိုပါစွန်ငှက်နှင့်ဆောင်းရာသီ Soldier, အဆိုပါ Marvels, Scarlet စုန်းမ, အဆိုပါမျှော်မှန်းချက်, Throg, အချိန်ကှဲလှဲအာဏာပိုင်, T'Challa စတား - Lord, ဗျာဒိတ်ရူပါရုံ, Wanda, ဝမ် Maximoff, WandaVision, အဖြူရောင်အမြင်, ဆောင်းရာသီ Soldier, ဖုတ်ကောင်, ဖုတ်ကောင်ဗိုလ်ကြီးအမေရိကတိုက်, ဖုတ်ကောင် Hunter Spidey, ဖုတ်ကောင်
အဆိုပါ Lego Marvel Collectible Minifiguresaဖြေရှင်းနိုင်သည် Star Wars ပြဿနာ
02 / 08 / 2021 02 / 08 / 2021 ခရစ် Wharfe 405 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, 75045 သမ္မတနိုင်ငံ AV-7 မော်တော်ယာဉ်တားဆီး, 75309 သမ္မတနိုင်ငံ Gunship, အုတ်ခဲ, Clone Trooper တပ်မှူး, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Hans Burkhard Schlömer, Jens Kronvold ဖရက်ဒရစ်, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego ဒီဇိုင်နာ, Lego မှ marvel, Lego Minifigures, Lego Star Wars, Marvel, သေးသေးလေး, မော်နီကာရက်ဘို, Reddit, Star Wars, အဆိုပါ LEGO Group, WandaVision
အသစ်ထွက်ရှိလာသော LEGO 71031 Marvel Studios Collectible Minifigures သည် p တစ်ခုဖြေရှင်းရန်ကူညီလိမ့်မည်artLEGO ကိုနှောက်ယှက်နေဆဲဖြစ်သော icular ပြသနာ
29 / 07 / 2021 30 / 07 / 2021 Rachael ဒေးဗီးစ် 318 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, LEGO စုဆောင်း Minifigures 71031 Marvel စတူဒီယို, Lego မှ marvel, Lego Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား, LEGO.com, Marvel, မော်နီကာရက်ဘို, WandaVision
LEGO 71031 ၏နောက်ထပ်ပုံရိပ်များ Marvel စုဆောင်းထားသော Minifigures စတူဒီယို
28 / 07 / 2021 28 / 07 / 2021 ခရစ် Wharfe 472 Views စာ0မှတ်ချက် 71026, DC စူပါသူရဲကောင်းများ, 71026 DC စူပါသူရဲကောင်းများစုဆောင်းထားသောအသေးစား, 71031 Marvel စတူဒီယို, Captain America, ဗိုလ်ကြီးဂarter, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Dc, Disney+, Thanos ၏ Blade ကိုအတူ Gamora, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego DC က, Lego မှ marvel, Lego စတိုးဆိုင်များ, LEGO.com, Loki, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, မော်နီကာရက်ဘို, Sylvie, အဆိုပါစွန်ငှက်နှင့်ဆောင်းရာသီ Soldier, Scarlet စုန်းမ, အဆိုပါမျှော်မှန်းချက်, အဆိုပါဆောင်းရာသီ Soldier, T'Challa စတား - Lord, WandaVision, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?, ဖုတ်ကောင်ဗိုလ်ကြီးအမေရိကတိုက်, ဖုတ်ကောင် Hunter Spidey
အဆိုပါ LEGO Group အသစ်ထုတ်ဖော်ပြသသည့် 71031 ပုံရိပ်များကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည် Marvel ကျွန်တော်တို့ကိုတစ် ဦး ထက်ပိုကောင်းတဲ့ပေးခြင်းစတူဒီယိုစုဆောင်း Minifigures